तिमी नहुनु भनेको जीवन पूर्ण नहुनु पनि त हो............. बुबा ! - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १३, २०७६ समय: १८:००:३३
“म आशा गर्छु मेरा छोराछोरीहरुले मलाई एक असल बाबुको रुपमा सधै स्मरण गर्नेछन ।” एकजना विदेशी लेखक यसो भन्नुहुन्छ । स्मरण हुनेहरुले त गर्लान तर सम्झनामै बाबुको तस्विर नहुनेले के स्मरण्म गर्ने…. । माफ गनुहोस् बुबा तपाँइ मेरो सम्झनामा कतै हुनुहुन्न । कुशे औंसि अर्थात बाबुको मुखहेर्ने दिन नजिकिदै जादा आमाले सम्हालेर राखेका पुराना फोटाहरु यसो पल्टाउछु । र तिम्रो स्मृतिलाइ गाढा बनाउँछु । मेरो मानस्पटलमा तिम्रो तस्विर छैन, तिमीसंग बिताएका याद छैनन्, तर म बढ्ने,पढ्ने र यो समाजसंग समायोजन हुने क्रममा पार गरेका थुप्रै खुड्किलाहरु छन् । जाहाँ तिम्रो चरम अभाव छ । त्यहि भएर त हिजो देखि आज सम्म तिमी चाहिने अवस्थामा आफन्त, नातागोता र साथिभाइ रुपी षुरुषहरुसंग हारगुहार गर्ने गरेकी छु ।
भनाइ छ नि….आमा सत्य हो तर बाबु विश्वास । आमाको जस्तो माया बाबुले गर्दैनन् । यसमा के कति सत्यता छ त्यसको हिसाब किताब त म गर्न सक्दिन । तर हामी जुन मानसिकता, सामाजिकिकरण र सामाजिक व्यवहारबाट हुर्कदै छौ, त्यहाँ बाबुको उपस्थितीलाइ प्रथम मानिन्छ । बाबुको नामलाइ प्रथम मानिन्छ । त्यहि ठाउँमा आमा गौण हुन्छिन । दोस्रो हुन्छिन ।
मृत्यु सत्य हो । अकाट्य हो । तर स्वयं मृत्यु नै डराउनेगरि आएको मृत्युले मानिसलाइ आघात मात्र पुर्याउदैन । अपाङ्ग नै बनाउछ । त्यस्तै मृत्यु हो तिम्रो । बच्चा बेलामा म त्यस्तै ४÷५ वर्षकि थिएहोला । छिमेकमा एउटी दिदि थिइन । खेल्ने क्रममा उनले भनिन तिम्रो बुबा त भगवानको घर जानुभयो नि थाहा छ….? त्यो नै पहिलो झड्का थियो मेरो लागि । अव तिमी नफर्कने ठाउँमा गयौ भन्ने । यस्तै झड्काहरु लाग्दै गए जीवनमा । माफ गर्नुहोला म “म” भएर लेखेपनि एउटा परिवारमा पिताबिना हुर्कन छोरीलाइ के कस्ता चुनौती आउँछन भन्ने विषयप्रति केन्द्रित हुन खोज्दैछु ।
“बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा बाबुको महत्व” यस विषयमा Ditta M. Oliker ले २०११ मा एउटा अध्ययन गरेकी छन् । जसमा उनी भन्छिन “जन्म देखिनै जो बच्चा बाबुसंग समय बिताउछन् उनीहरु भावनात्मक रुपमा आफुलाई बलियो ठान्छन् । वरीपरिका अवस्थितीहरुसंग खुल्नका लागि बढि आत्मविश्वासी हुन्छन । यसले उनीहरु जति ठुला हुन्छन् उति नै स्वस्थ्य सामाजिक सम्वन्धहरु राख्नका लागि योग्य बन्छन् ।” यो अध्ययनबाट पनि पुष्टि हुन्छ पिताको महत्व ।
आत्मविश्वास भन्ने चिज आर्जन गरिने विषय हो । व्यक्तिका धारणा, प्रस्तुती,निर्णय, क्षमता आदिमा उसको आत्मविश्वास प्रतिविम्वित हुन्छ । तर आत्मविश्वासको उपयुक्त वातावरण निर्माणमा भने धेरै पक्षको भुमिका रहेको हुन्छ । जसमा बाबु प्रमुख हुन्छन भन्ने सत्य नकार्न सकिन्न । समय संगै म हुर्कदै गए । त्यस्तै ४÷५ कक्षामा अध्ययन गर्दाको कुरा हो । मेरा एकजना शिक्षकले भोली तिम्रो बुबालाइ स्कुलमा बोलाउनु छात्रवृत्तिको विषमा कुरा गर्नु छ भने । मैले मेरो बुबा हुनुहुन्न भन्न नपाउदै तिम्रो त बुबा हुनुहुन्न हगि……..ठिकै छ हजुरबुवालाइ बोलाउनु है भनेर गए । त्यस बेला त यो कुरा सामान्य लाग्यो । तर त्यसको प्रभाव भने असामान्य हुनेरहेछ । बुबाको सट्टामा आमालाई किन बोलाइएन बरु हजुरबुबालाइ बोलाइयो । यो विषयले बारम्बार विथोलीरहन्छ ।
म स्कुल पढ्ने भए । कलेज पढ्ने भए । साथीहरु पनि धेरै केटीहरु नै भए । घरमा आमाका साथीहरु महिला । महिलाकै आवागमन हुने क्रम बढ्यो घरमा । यसो हुदा मैले पुरुष बुबा,काका,मामा, दाजु भाई संग संगत गर्ने मौका पाइन । सामाजिकिकरणको क्रममा पुरुषका बहस र छलफलमा सरिक हुन पाइन । मेरो सामाजिक फैलावटको आयतन साँघुरिदै गयो । मैले आफ्ना काका, मामा, दाजु,भाई समयमै नचिन्नु भनेको आम पुरुष जतिबेला जसरि चिन्नुपर्ने हो त्यसरि नचिन्नु पनि त हो । यसले मलाइ प्रत्यक्ष रुपमा नोक्सान पुर्याएको महसुस हुन्छ आजपनि ।
मेरो कक्षामा संगै पढ्ने साथीको बुबा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उसलाइ छन्दका कविता बाचन गरेर सुनाउने, कविता लेख्न सिकाउने र आफु पढ्न बस्दा संगै राखेर पढाउने गर्नुहुन््रथ्यो । पहिलो गुरु, पहिलो प्रशंसक, पहिलो आलोचकको भुमिकामा सधै उसको बुबा देखेर मलाइ उसंग रिस उठ्थ्यो । बोल्न मन लाग्दैनथ्यो । प्रतिस्पर्धाको भावना उत्पन्न हुन्थ्यो । अहिले सम्झन्छु म इष्र्याको उत्कर्षमा पुगेकी रहेछु । र त्यो डाहाको एउटै मात्र कारण बुबा हुनुहुन्थ्यो । यो घटनाले मलाइ मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनाएको थियो ।
एक दिन आमा र म आफन्तको घर गएका थियौ । लगभग ७० वर्ष उमेरकि हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको छोरो विवाहको लागि केटी हेर्न गएका रहेछन् । उनले आफ्नि आमालाइ भने, आमा केटी राम्रै लाग्यो । घरपरिवार पनि ठिकै छ । तर केटीको बाबु रहेनछन के गर्ने आमा ! भनेर छोराले सोधे । आमाको तुरुन्त जवाफ आयो । भो भो….. बाबु नभएकी छोरी विवाह गर्न हुन्न । शिलस्वभाव भएका हुन्नन् । संस्कारी हुदैनन् । छाडा हुन्छन । त्यसबेला मेरी आमा र मैले एक अर्काको मुखमा हेराहेर गर्यौ । गहिरो मौनतामा संवाद गर्यौ । र घर फर्कियौ । आमा नमज्जाले दुख्नुभयो शायद त्यस घटनाले । बाबु नहुदा विवाह गर्नपनि पो गाहे हुने रहेछ भन्ने कुराको महसुस त्यसबेला भयो मलाइ । यसरी तिमी गएपछि,घर पुर्ण घर भएन । जीवन, पुर्ण जीवन भएन । तिमी नभएर त हुदै हो । त्यो भन्दा पनि अझ बढि तिमी नहुदा परिवार, समाज र हरेक सम्वन्धहरु प्रतिको भूमिका परिवर्तन भएर हो । अझ भनौ मेरी आमालाइ तिमी सरहको स्थान प्राप्त नभएर हो । त्यो स्थान ग्रहण गर्ने हैसियत यो समाजले नदिएर हो ।
स्कुल जादा समाउने चोरी औंला नहुनु । परीक्षामा फेल हुदा शिर झुकाउँने ठाउँ नहुनु । सफलतामा अट्टाहाँसले अंगाल्ने साथ नहुनु । शिरभरी आशिर्वाद दिने हात नहुनु । यि सबै नहुदा जीन्दगि, जीन्दगि जस्तो नहुनु पनि त हो । तथापी मैले लिने वायुमा तिम्रो अंश छ । आमा सुत्ने कोठामा भएको तस्विरमा तिमी हाँस्दा घर उज्यालो हुन्छ । र त्यो उज्यालोमा तिम्रो हिस्सा छ । तिमीले भौतिक शरिर विसर्जन गर्यौ तर त्यो बाहेकको “तिमी” यहि छौं । बाबुको मुख हेर्ने दिनको यस लोकमा र परलोकमा हुने सबै बुबाहरुलाइ शुभकामना ।